Pocophone F1 ayaa lagu iibiyay shan daqiiqo oo kaliya gudaha Hindiya | Androidsis
Pocophone F1 ama POCO F1 wuxuu balan qaadayaa inuu ka mid noqon doono telefoonada waaweyn ee qeybtan labaad ee sanadka. Moodelkii ugu horreeyay ee sumadda cusub ee Xiaomi ayaa durba bilaabatay in laga billaabo suuqyada caalamiga ah, waxayna umuuqataa inay tahay guul. Uguyaraan Hindiya, halkaas oo maalintiisii ​​ugu horreysay ee iibinta aaladda ay iibisay. Wuxuuna ku sameeyay daqiiqado gudahood.
Tan waxaa ku dhawaaqay astaanta lafteeda iyada oo loo marayo shabakadaha bulshada. Pocophone F1 ayaa lagu iibiyay shan daqiiqo gudahood. Laakiin kaliya maaha xawaaraha lagu iibiyay waa mid xusid mudan, dakhliga ay abuurtay ayaa sidoo kale siinaya waxyaabo badan oo looga hadlo.
Tan iyo shan daqiiqo gudahood, waqtiga ay ku qaadatay inuu dhammaado, ayaa leh wuxuu abuuray $ 28 milyan shirkadda. Sidan oo kale, waxay noqoneysaa qaabka ugu guusha badan uguna iibsiga badan India gudaheeda waqti gaaban.
Tani waxay mar kale caddaynaysaa in Pocophone-kan F1 uu awood u leeyahay inuu ku guuleysto dadka isticmaala. Ma jiraan tirooyin iib gaar ah oo la bixiyay, laakiin qiyaas ahaan qaarkood waa inay ka hooseysaa 70.000 unug. In kasta oo haddii iibku ka tirsan yahay nooca ugu raqiisan taleefanka, waxay noqon kartaa xitaa 100.000 oo unug.
The tirooyinka iibka la taaban karo ee Pocophone F1 ee Hindiya. Telefoonku wuxuu ka bilaabanayaa suuqyo cusub maalmahan, waxaa la filayaa inuu maanta si rasmi ah u yimaado Spain. Marka waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko sida macaamiisha ay uga falceliyaan.
Tan Pocophone-ka F1 Xiaomi waxay muujineysaa inaad sameyn karto a moodel ku dhex jira heerka sare oo leh qiimo aad u qiimo badan. Tanina waa wax sida aan ka arki karno arrinta Hindiya, ay si aad ah u shaqeyso. Waxaan rajeyneynaa inaan helno xog la taaban karo oo ku saabsan unugyada uu qaabkani dhawaan iibin doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Pocophone F1 ayaa lagu iibiyaa shan daqiiqo gudahood Hindiya